बिहिवार, पुष ५, २०७५
सुरक्षित र विश्वसनीय वातावरण नै लगानीकर्ताको रोजाइ
सरकारले आगामी चैतमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी गरेको छ । सम्मेलनका लागि लगानी बोर्ड बैठकले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको संयोजकत्वमा निर्देशक समितिसमेत गठन गरेको छ ।
बुधवार, पुष ४, २०७५
कोसी कोरिडोरमा धरानको अवरोध र समाधानका उपाय
सुनसरीको इनरुवा सबस्टेसनबाट संखुवासभासम्म पुग्ने २२० केभी कोसी कोरिडोर प्रसारणलाइन निर्माण भइरहेको छ । वनबाट स्वीकृतिलगायतका लामो झमेलामा फसेको सो प्रसारणलाइन आयोजनामा पछिल्लो पटक धरान उपमहानगरपालिका–२० चिन्डे डाँडा क्षेत्रबाट जाने प्रसारणलाइनको रुट सार्न उपमहानगरपालिकाले पत्राचार गरेपछि र केही फाउन्डेसनमा निर्माणमा अवरोध गरेपछि ठूलो समस्या देखिएको छ ।
संघीयतापछि कृषि क्षेत्र प्राथमिकताविहीन बन्दै
संघीयतापछिको दोस्रो बजेट अहिले कार्यान्वयनमा आएको छ । कृषि क्षेत्रको बजेट कार्यान्वनयको हिसाबले गत वर्ष निकै कमजोर वर्षका रूपमा रहेको प्रतिवेदनहरूले देखाइरहेका छन् । यो वर्ष पनि पहिलो चौमासिक प्रतिवेदनले राम्रो संकेत दिएको छैन । संघीयता लागू भएपछिको दोस्रो आर्थिक वर्षको मध्यसम्म पुगिसक्दा कृषि क्षेत्रको विकासको मागचित्र ठ्याक्कै कस्तो बनिरहेको छ भन्ने सक्ने अवस्थामा सरकार छैन ।
ब्याजदर वृद्धिले अर्थतन्त्र जोखिममा
नेपाल बैंकर संघले ब्याजदर नबढाउने भद्र सहमति गरेको भए पनि व्यक्तिगत निक्षेपको हकमा खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा लिन सकिने व्यवस्था गरेसँगै बैंकहरूको ब्याजदर हरेक दिन बढ्दो गतिमा देखिएको छ । यसअघि बैंकरहरूले भद्र सहमति गरेर व्यक्तिगत निक्षेपलाई १०.५ र संस्थालाई १० प्रतिशत ब्याजदर दिने सहमति गरेकोमा व्यक्तिगत निक्षेपको हकमा हटाएका हुन् । त्यसैगरी बचतमा पनि अधिकतम् ७ र न्यूनतम् ५ प्रतिशतको सहमति भने कायमै छ ।
आइतवार, पुष १, २०७५
पार्टीमा नयाँ उर्जा दिने संकल्प आवश्यक
महाधिवेशन भएको वर्ष वाहेक प्रत्येक वर्ष हुनुपर्ने कांग्रेस महासमिति बैठक करिब ६ वर्षपछि बसेको छ । शनिबार काठमाडौंको एक पार्टी प्यालेसमा सभापति शेरबहादुर देउवाले महासमिति बैठकको उद्घाटन गरेका छन् ।
नेपालमा व्यावसायिक फोटोग्राफीको इतिहास त्यति लामो छैन । नेगेटिभबाट डिजिटल प्रविधिमा गएपछि धेरै नै सजिलो भएको छ र काम गर्ने तरिका, प्रविधिसमेत फेरिएको छ । तर, यसको विगत फर्केर हेर्ने हो भने निकै संघर्षपूर्ण थियो । २०१७ सालमा काठमाडौंको न्युरोडमा स्थापना भएको फोटो कन्सर्नलाई भने व्यावसायिक फोटोग्राफीको पायोनियर मान्ने गरिन्छ ।
मुलुकको आवश्यकता, समयको माग र जनताको अपेक्षा शासकीय सुधारको रहेकाले सरकार, निजामती कर्मचारी र नागरिकको सहकार्यको विकल्प नरहेको बताउने पुष्यप्रसाद न्यौपाने नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् । काविल प्रशासक न्यौपाने ८ वर्षयता नेपालको निजामती कर्मचारीलाई तालिम प्रदान गर्ने नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक पदमा कार्यरत छन् । उनी दोस्रो कार्यअवधिका लागि कार्यरत छन् । ३० वर्ष निजामती सेवामा बिताएका न्यौपाने निजामती कर्मचारीसँग काम गर्ने औसत क्षमता रहेको बताउँछन् । उनी सबै खराब, सबै राम्रा भन्ने होइन, औसत क्षमताका कर्मचारीको संख्या अधिक रहेको बताउँछन् ।
काठमाडौंमा जन्मेका शरदविक्रम राणाले सार्वजनिक प्रशासनमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । स्वदेश र विदेशबाट कम्प्युटरका विशेष प्रकारका तालिम लिएका राणाले संयुक्त राष्ट्रसंघको युनिडो भन्ने संस्थामा १९८७ देखि १९९३ सम्म आबद्ध रहेर काम गरेका थिए । युनिडोमा उनले गुणस्तर तथा नापतौल विभागको क्षमता वृद्धि र ल्याब्रोटरीसम्बन्धी काम गरेका थिए ।
अहिलेको तरलता समस्याको मुख्य कारक सरकार नै हो । किनकी कात्तिक मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार सरकारी ढुकुटीमा ३०८ अर्ब ७४ करोड नगद मौज्दात थुप्रिएर बसेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले दुई महिनाअघिको मात्र तथ्यांक जारी गर्ने भएकाले पछिल्लो डेढ महिनामा यो अझ वृद्धि भएको अनुमान गरिएको छ ।
मुलुकमा अहिले दुईतिहाइ बहुमतको सरकार छ, जसको नेतृत्व नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सधैं उच्चारण गर्ने शब्द हो, ‘विकास, समृद्धि र सुशासन ।’ ओली प्रधानमन्त्री भएको ९ महिना बितिसकेको छ । तर, उनै ओलीले सधैं रट्दै आएको विकास, समृद्धि र सुशासनको अनूभूति जनताले गर्न सकेका छैनन् । जनअपेक्षाअनुसारको काम गर्न सरकार चुकेको विश्लेषण भइरहेको छ ।
शुक्रवार, मंसिर २१, २०७५
पछिल्लो समय औद्योगीकरणको विकाससँगै वायुमण्डलमा हरितगृह ग्यास, कार्बनडाअक्साइड तथा नाइट्रोजनजस्ता ग्यासको मात्रा बढ्न थाल्यो । फलस्वरूप भएको जलवायु परिवर्तनका कारण पृथ्वीमा ताक्रमको मात्रा पनि बढ्दै जान थाल्यो ।
विगतमा संसदको विकास समितिको सभापति बनेर मुलुकका सबै विकासलाई नजिकबाट नियालेका रवीन्द्र अधिकारी अहिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बनेका छन् । राष्ट्रिय गौरवका पाँचवटा आयोजना सञ्चालनको जिम्मासमेत पर्यटन मन्त्रालयमै रहेको छ ।
औशानी मेधागंगोडा लाबे संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) की डेपुटी कन्ट्री डाइरेक्टर हुन् । अनुसन्धानका क्षेत्रमा १५ वर्षे अनुभव रहेको लाबेले श्रीलंकाको शिक्षा मन्त्रालयका साथै बेल्गेन एड एजेन्सी, हेलन केलर इन्टरनेसनललगायतमा काम गरेको अनुभव पनि छ । युरोपियन युनियनमा समेत काम गरिसकेकी उनले यूएनडीपीको देशीय आवासीय प्रतिनिधिका रूपमा समेत काम गरिसकेका छन् ।
बाटो बिराउँदै गएको सरकारलाई अर्थविद्को सुझाव
दुईतिहाई बहुमतको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको शक्तिशाली सरकार यतिबेला चालू आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड रूपैयाँको संघीय बजेट कार्यान्वयन गर्ने क्रममा छ । ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले आर्थिक वर्ष सुरु भएको पहिलो साढे चार महिना नाघ्दा विकास खर्च जम्मा १० प्रतिशत मात्र गरेको छ ।
लघुवित्तलाई स्वच्छ बनाउने कसरी ?
साना किसान विकासबाट सुरु भएको लघुवित्तमा लाखौं सर्वसाधारण आबद्ध छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अतिरिक्त सहकारी र गैरसरकारी संस्थाहरूले समेत लघुवित्त सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । बैंकको पहुँचमा पुग्न नसक्ने गरिब तथा विपन्न वर्गलाई समूहमा आबद्ध गराई उनीहरूलाई ऋणलगायतका सहयोग गर्दै आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तीकरण गराउने कार्यक्रम पछिल्लो समयमा आलोचित हुँदै आएको छ ।